नयाँ पार्टी गठनपछि के भन्छन् नयाँ दलका नेताहरु ? – Nepal Japan
नयाँ पार्टी गठनपछि के भन्छन् नयाँ दलका नेताहरु ?
नेपाल जापान ३ भाद्र ०१:००
अन्ततः देशको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) विभाजन भएका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेकपा हुँदैदेखि झागिँदै गएको विवाद दुई पाटी पुनः अस्तित्वमा आउँदा झनै मौलाएर विभाजनको अवस्थामा पुग्यो ।
पटकपटक दल विभाजन हुँदा सरकारलाई स्थिरता प्रदान गर्न नसक्ने भएकोले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई कडाइ गरिएको थियो । तर दल विभाजन गर्न सजिलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी भएपछि त्यसलाई उल्ट्याइदिएको छ ।
प्रमुख राजनीति दलको विभाजनप्रति आम नागरिकले चिन्ता व्यक्त गर्दै सत्ता स्वार्थ र सुझबुझपूर्ण राजनीतिक नेतृत्वको कमी देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदनपछि प्रस्तावित नयाँ राजनीतिक दल नेकपा एमाले (समाजवादी)का नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने नेपालका अरु वाम पार्टीलाई समेटेर क्रान्तिकारी वाम आन्दोलनको नयाँ धु्रवीकरण गर्ने योजनाका साथ नयाँ दल दर्ता गरिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एमालेमा अलमलिएका कयौँ साथीलाई अब चाँडोभन्दा चाँडो एमाले (समाजवादी)भित्र समावेश हुन हामी आह्वान गर्छौँ । त्यहाँ रहेकासँग कुनै शत्रुता गर्दैनौँ ।
एमालेले अब कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन सक्दैन ।” माधव नेपालको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त दलमा ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र झलनाथ खनाल बरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ ।
साविक एमालेबाट ५८ केन्द्रीय सदस्य र ३१ जना सङ्घीय सांसद नयाँ दलमा आउनुभएको जानकारी दिइएको छ । प्रारम्भमा खुला किताब चुनाव चिह्न प्रस्ताव गरिएको चर्चा चलेको भए पनि निर्वाचन चिह्नबारे निर्णय भइनसकेको र छलफलकै चरणमा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
पटक–पटक प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि त्यसको रक्षा तथा संविधानको रक्षाका एमाले९समाजवादी० दर्ता गर्नु परेको नेता पाण्डेले प्रतिक्रिया दिनुभयो । एमाले नेतृत्वबाट आफूहरूप्रति गरेको ब्यवहारका कारण सो पार्टीमा बस्ने आवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएपछि चाँडै पार्टीको राष्ट्रिय भेला र सम्मेलन गरीे कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुर्नगठन गर्ने र सर्वहारा श्रमजीवी जनताको हकहित अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लड्ने दृढताका साथ काम गर्ने उहाँले अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगमा आजै समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक)का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले साविकको जसपा विभाजन भएर नै नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभाजित राजनीतिक दलका रूपमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक दर्ता भएको छ, सावित जसपाको १५ सांसद र १७ केन्द्रीय सदस्य नयाँ दलमा आउनुभएको छ ।”
अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो रहनुभएको नयाँ दल २४ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको छ । मुलुकमा अरु दल पनि विभाजन भएको हुँदा विभिन्न कालखण्डमा पार्टी टुटफुट त भई हाल्छ नि भन्ने प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ नेता महतोले भन्नुभयो, “कुनै अध्यादेशले फाइदा पनि गर्छ नि त, आवश्यकता थियो र त अध्यादेश आएको हो नि १”
सोही दलका नेता शरदसिंह भण्डारीले आफूहरूले गठन गरेको नयाँ पार्टीले समावेशीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने तथा दलको चरित्र र सङ्गठन सशक्त बनाउने बताउनुभयो ।
तराई मधेशका माग मुद्दालाई कमजोर हुन नदिने हेतुले विगतमा पार्टी एकीकरण गरिएको सुनाउँदै उहाँले दलभित्र सत्ताको राजनीति अघि सारिएपछि विभाजन नै उपयुक्त बाटो ठानिएको बताउनुभयो ।